ऊ सिक्दै छ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
हामीलाई बच्चा ‘अल्लाद्दिनको जिन’जस्तो चाहिएको छ, तर बच्चा त हाम्रै जिन हो, अल्लाद्दिनको होइन । हाम्रा राम्रा–नराम्रा सारा कुरा आफूभित्र लिएर आएको छ । जे रोप्यो, त्यही फल्ने हो । जसरी मलजल गर्‍यो, त्यही अनुसार सप्रने कि बिग्रने भन्ने निर्भर गर्छ ।
असार ६, २०७७ स्वीकृति बराल
बिगार गर्नु उसको उद्देश्य हुँदै होइन । न उसले सक्दिनँ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै त्यो सामान उठाएको थियो, न ऊ पानी पोखिएपछि के–के नोक्सानी हुन्छ भन्ने जान्दथ्यो । बच्चा न हो, जे मन लाग्यो त्यही गर्छ । उसलाई गाली गर्नेहरूलाई पनि यो राम्रोसँग थाहा छ, तैपनि हकारिरहन्छन् । किनभने उनीहरूलाई झर्को लाग्छ, उसका बिगार सम्झिएर । अब सिसा उठाउनुपर्छ, पानी सोहोर्नुपर्छ, सामान भिजेको भए सुकाउनुपर्छ । उसको सानो गल्तीले उनीहरूको काम थपिन्छ ।
सबैले गाली गरिरहँदा ऊ भने जिल्ल परिरह्यो । अलिअलि डरायो पनि । काम बिगारेपछि प्याट्ट एकदुई थप्पड खानु ठूलो कुरो होइन उसका लागि । सिकाउने बहानामा उसलाई गाली गर्ने र पिट्ने ‘अधिकार’ ठूलालाई छ । उसको उमेर नै सिक्ने हो र सिकाउनु ठूलाको कर्तव्य । तर, ऊ कहाँ हामीले सिकाउन खोजेको मात्र सिक्छ र ? हाम्रो सिकाउने बेला भएजस्तै उसको पनि त सिक्ने बेला हो । एउटा पाठ सिकाउन खोज्दा उसले धेरै अतिरिक्त कुरा पनि सिकिरहेको हुन्छ । सिसा फुटाउनु गलत हो भन्ने त उसले बुझिहाल्यो, तर उसले यही मात्र सिकेन । उसले सिक्यो— कसैले कुनै गल्ती गरे गाली गरिहाल्नुपर्छ, तर्सिने गरी कराउनुपर्छ, ठूला भएपछि सानासँग जसरी बोले पनि हुन्छ ... । ऊ हाम्रो प्रवचनबाट भन्दा बढी व्यवहारबाट सिक्छ । ऊ हर सेकेन्ड हामीबाट केही न केही सिक्दै हुन्छ, जुन कुरा हाम्रो दिमागमा हर समय रहँदैन ।
अर्को दिन कप फुट्छ । पहिलेको गालीले तर्सिएको ऊ अब कप लुकाउँछ । तर, ठूला मान्छेले थाहा पाइहाल्छन् । अब नयाँ गाली थपिन्छ, ‘अब त ढाँट्ने पनि भइसक्यो । जति ठूलो भयो, त्यति खराब हुँदै छ ।’
ऊ खराब होइन । बिचरालाई त खराबको अर्थसम्म थाहा छैन । न त उसले रहरले ढाँटेको हो । उसले गाली नखानका लागि मात्र ढाँटेको हो । किनभने उसलाई गाली मन पर्दैन । गाली कसलाई मन पर्छ र ? उसले नजानेर गल्ती गर्‍यो र अनजानमा भएका गल्ती लुकाउन झुट बोल्यो । ठूलाको रिसबाट बच्न ढाँट्यो । यो उसको गल्ती होइन, गल्ती त हाम्रो हो । उसलाई तर्सायौं । असल बनाउन र ठीक काम ठीकसँग गर्न सिकाउने तरिका नजान्दा उसलाई ढाँट्ने बनायौं । सुरुमै जग फुट्दा आफैं डराएको उसलाई अझै गाली गर्नुको साटो ‘आत्तिनुपर्दैन, फुटेर केही हुँदैन, अर्कोचोटि काम गर्दा होस गर्नू’ मात्रै भनिदिएका भए सायद ऊ आफ्नासँग डराउँदैन थियो, न त डरका कारण झूट नै बोल्थ्यो ।
‘फूल टिप्नु हुँदैन है’ भन्दै गाली गरेर उसकै अगाडि राम्राराम्रा फूल टिपी भगवान्‌लाई चढाएको हामीलाई यादै हुँदैन । हामी यस्ता धेर काम गर्छौं र बच्चालाई अलमलमा पार्छौं । अनि हामीले सिकाएर बच्चाले के सिक्ला ?
हामी झर्केर बोल्ने सानो बच्चासँग रिसाउँछौं, कहाँबाट सिक्यो यस्तो बोली भनेर । कहाँबाट सिक्छ र ? हामीलाई यादै हुँदैन, आफ्नो कामको तनाव, अस्तव्यस्त जिन्दगीको निराशा बच्चामाथि निकाल्छौं भनेर । आफूभन्दा ठूलालाई कराउनुलाई अनुशासनहीनता मान्ने हामी बच्चालाई गाली गर्नु चाहिँ अनुशासनहीन काम मान्दैनौं । बच्चालाई गाली गरेकामा हाम्रो तर्क हुने गर्छ, ‘यसकै भलाइका लागि गरेको त हो नि । भोलि बिग्रियो भने के गर्नु ?’
हामी पनि त कुनै दिन साना थियौं । हामी पनि त हाम्रै बच्चा जस्ता थियौं, जसमाथि हाम्रा बुबाआमाले थुप्रै सपना सजाएका थिए । हामी पनि सिक्दासिक्दै हुर्किएका हौं— मीठो बोल्नू, असल बन्नू, कुलतमा नफस्नू, अरूलाई सधैं सहयोग गर्नू, समय खेर नफाल्नू, कहिल्यै कसैलाई नमीठो वचन नलगाउनू ... । यस्तै कुरा न हुन् आफूभन्दा ठूलाले सिकाउने १ कति सिक्यौं त हामीले ? के हामी त्यस्तै बन्यौं त ? अहँ, बन्न सकेनौं । मीठो बोल्न मात्रै सिकेका भए आज आफ्नो बच्चा हुर्काउँदा हाम्रो मुखबाट गाली निस्कँदैन थियो । हामी जे सिकाइयो त्यो बनेनौं । आफूले जे देख्यौं र जे भोग्यौं, त्यस अनुसारको बन्यौं । भोलि हाम्रा बच्चा पनि त्यस्तै बन्छन् ।
‘धेरै चकचक नगर, नत्र म पुलिस बोलाइदिन्छु, तिमीलाई लिएर जान्छ,’ ‘चुप लागेर सुत, बाहिर धोक्रे बूढो आएको छ, रुने बच्चालाई बोरामा हालेर लैजान्छ,’ ‘एक्लै नहिँड, अर्को मान्छेले च्याप्प समातेर लैजान्छ,’ ‘खानेकुरा सबै खाऊ, नत्र बिरामी भयौ भने डाक्टरले सुई लगाइदिन्छन्’ आदि भन्दै हामी आफूसँग बस्दा सुरक्षित ठानिरहेको बच्चाको मनमा डर हुलिदिन्छौं । बच्चालाई शान्त, असल र समझदार बनाउनका लागि हामी यति धेरै गलत तरिका अपनाउँछौं, बच्चा असल होइन भ्रमित बन्छ, बहादुर होइन डरपोक बन्छ । अब ऊ पुलिस देखे पनि डराउँछ, डाक्टर देखे पनि डराउँछ, राति एक्लै सुत्न पनि डराउँछ । किनभने घरबाहिर त धोक्रे बूढो उसलाई लिन आएको हुन्छ । ऊ बाहिर हिँड्न पनि डराउँछ । यस्ता कुराले बच्चा डराएर एक छिन शान्त बस्दा हामीलाई एकै छिन आराम त होला, तर उसमा राम्रो प्रभाव पर्दैन र जीवनभर सताइन्छ । हामी उसको दिमागमा नकारात्मक कुरा भरिरहेका हुन्छौं । भर्खर जन्मँदा सर्पसँग नडराउने बच्चा अब सामान्य कुराको छाया देख्दा पनि डराउने बन्छ । भर्खर जन्मँदा उसको दिमाग खाली हुन्छ, डर हुँदैन । जति भर्ने हो, हामी नै भरिदिँदै जान्छौं अनि यस्तो भइस् र उस्तो भइस् भनेर उसैलाई गाली पनि गर्छौं । अझै हामी आश्चर्यचकित हुँदै भन्छौं, ‘हामी त यस्ता थिएनौं है । यो कहाँबाट यति डरपोक भयो ?’ कुनै पनि कुरा गलत तरिकाले सिकाउनुभन्दा त नसिकाएकै राम्रो ।
हामी आफ्नो बच्चा अरूको बच्चासँग दाँज्छौं । आफ्नोमा कमी देखिए ‘त्यो बच्चाले गर्न सक्ने, यसले चाहिँ गर्न नसक्ने हुन्छ ?’ भन्छौं । हामी खराबी औंल्याउन एक सेकेन्ड पनि लगाउँदैनौं । बच्चा फेरि जिल्ल पर्छ । खासमा दाँज्ने नै हो भने हामीले आफूलाई असल बच्चा हुर्काउनेहरूसँग दाँज्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ उनीहरूसँग कसरी सिकाउँदा बच्चाले सिक्छ भनेर । बच्चालाई सिकाउन कला चाहिन्छ । कमजोरी बच्चाको होइन, कमजोरी त सिकाउनेमा हुन्छ । मार्गदर्शक असल, समझदार भए मात्र मार्ग स्पष्टसँग देखिने हो ।
मोबाइलको युग हो यो । जे कुरा पनि मोबाइलमै पाइन्छ । एक छिन फुर्सद भयो कि मोबाइलको स्क्रिन तल र माथि सारिहाल्ने हामी त्यहाँबाट आँखै नहटाई बच्चालाई गाली गर्छौं, ‘खालि मोबाइल हेरेको छ, बसेको छ । आँखा विग्रिएला है । अचेल मोबाइलले गरेर अरूसँग बोल्दै नबोल्ने भइसक्यो ।’ हामी आफैं पनि त अचेल मोबाइलमै हराइरहन्छौं नि । बच्चा मात्र होइन, अहिलेका प्राय: ठूला मान्छे पनि एकअर्कासँग कुरा कम गरिरहेका र मोबाइल बढी हेरिरहेका हुन्छन् । हामी आफू सुध्रिनु जरुरी छ कि छैन ? अचेल त बच्चाले आमाबुबाबाट पाउने समय पनि मोबाइलले नै पाएको छ । जताबाट पनि घाटा त बच्चालाई नै छ ।
हामी उमेरले तीन दशक नाघिसकेका मान्छे एक दशक पनि पार नगरेका बच्चाबाट यति धेरै आश गर्छौं, जति बेला पनि सिकाउनमै व्यस्त रहन्छौं । हामी आफू र बच्चाको हितका लागि भन्दा धेरै अरूले भेट्दा ‘आहा, कति राम्रो संस्कार सिकाउनुभएको, कसरी बन्छ बच्चा यस्तो ?’ जस्ता कुरा सुन्नका लागि सिकाउँछौं । हामीलाई बच्चा समाजले तोकेको मापदण्ड अनुसारको असल बनाउनु छ । असल बनाउन खोज्नु निश्चय पनि नराम्रो कुरा होइन, तर तरिका गलत भयो भने नतिजा गलत नै निस्कन्छ ।
हाम्रो रहर हामीले केही सिकाउँदा बच्चाले एकैचोटिमा बुझोस् र गल्ती नै नगरी सिकाए जस्तो गरिहालोस् भन्ने हुन्छ । हामीलाई बच्चा ‘अल्लाद्दिनको जिन’ जस्तो चाहिएको छ, तर पाउनलाई त आफूजस्तै पाइएको छ । बच्चा त हाम्रै जिन हो, अल्लाद्दिनको होइन । हाम्रा राम्रा–नराम्रा सारा कुरा आफूभित्र लिएर आएको छ । ऊ हाम्रो अंश हो । उसलाई कस्तो बनाउने भन्ने त हाम्रै हातमा हुन्छ । जे रोप्यो त्यही फल्छ । जसरी मलजल गर्‍यो, त्यही अनुसार सप्रने कि बिग्रने भन्ने निर्भर गर्छ । त्यसैले उसका सँगसँगै आफ्ना कमीकमजोरीमा पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । ‘फूल टिप्नु हुँदैन है’ भन्दै गाली गरेर उसकै अगाडि राम्राराम्रा फूल टिपी भगवान्लाई चढाएको हामीलाई यादै हुँदैन । हामी यस्ता धेरै काम गर्छौं र बच्चालाई अलमलमा पार्छौं । अनि हामीले सिकाएर बच्चाले के सिक्ला ? हामीले बनाएर भविष्यमा के बन्ला ? कस्तो बन्लान् ? प्रकाशित : असार ६, २०७७ १०:३९
पर्यावरणीय संरक्षणका लागि आदिवासीले विभिन्न समयमा आफ्नै किसिमको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, यो महामारीको समयमा आदिवासीकै संरक्षण आवश्यक छ ।
जेष्ठ ३१, २०७७ स्मृति रानाभाट
सन् १९५० ताका डाभी कोपेनवाका हजुरबुबा र हजुरआमाले पहिलोपटक आफ्नो समुदायइतरका मानिसलाई भेटेका थिए । आर्का नदी किनारमा भेटिएका गोरा मानिसहरूसँग बन्चरोलगायतका फलामे औजार थिए । कोपेनवाका हजुरआमा–हजुरबुबाले उनीहरूसँग ती औजार माग्थे । र, औजार कोपेनवाको समुदायभरि नै चलाइन्थ्यो ।
४० वर्षपछि कोपेनवाले यी कुरा सुनाए । सन् १९५० र १९६० को दशकमा भेनेजुएलाको सिमानामा बस्ने आदिवासी यानोमामी समुदाय पूर्णरूपले लोप हुने स्थितिमा पुग्दा बाँच्न सफलमध्येका एक हुन्– कोपेनवा । सन् २०१० मा विभिन्न सञ्चार माध्यममा उनले यी कुरा सुनाएका थिए । कोपेनवाका अनुसार, समुदायमा दादुरा र अन्य संक्रामक रोग फैलिएको थियो, जसले समुदायलाई लोप हुने स्थितिमा पुर्‍यायो ।
विगतमा आदिवासी समुदायमा संक्रामक महामारीले प्रभाव पारेका घटना थुप्रै छन् । महामारीका कारण कतिपय समुदाय लोप भए, कतिपय जसोतसो तंग्रिएका छन् ।
डाभीको समुदाय पनि पटकपटक महामारीको चपेटामा परेको विगत छ । सन् १९७० ताका अमेजनको योनामामी आदिवासी बस्ने क्षेत्र नजिकबाट बाटो बनेपछि तस्करसँगै महामारी आउने सम्भावना बढ्यो । महामारीको प्रवेशले सन् ८० र ९० को दशकमा आफ्नो पूर्ण जनसंख्याको २० प्रतिशत गुमायो त्यस समुदायले । सन् २००७ मा यानोमामीलाई सम्बोधन गरेको भाषणमा डाभी भन्छन्, ‘बाहिरका मान्छेसँगको सम्पर्ककै कारण म अनाथ भएँ । सरकारले सडक बनाएसँगै महामारीले प्रवेश गर्‍यो र समुदायका थुप्रैको ज्यान गयो ।’
१५ औं शताब्दीमा युरोपियन उपनिवेशवादीहरूले अमेरिका जाँदा दादुरा, टीबी, प्लेग, बिफरलगायतका सरुवा रोग आफूसँगै लगेका थिए । स्थानान्तरणको क्रममा अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरू यो रोगको सिकार भए । प्रतिरक्षा शक्ति कम भएका आदिवासीलाई सन् १५२० देखि फैलिएको महामारीले सोत्तर बनायो । बिफर (स्मलपक्स) ले अमेरिकी र मेक्सिकोका आदिवासीको बस्ती नै खाली बनाएको थियो । एक शताब्दीमा अमेरिका र मेक्सिकोमा रहेका आदिवासीमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशतले ज्यान गुमाए । सन् १९१७ मा सामान निर्यात गर्ने ‘हार्मोनी’ नामको जहाज हालको क्यानडाको ओकाक क्षेत्रमा पुगेको पाँच दिनमै स्प्यानिस फ्लुका कारण आठ व्यक्तिको मृत्यु भयो । डिसेम्बरसम्ममा ओकाकका २६३ आदिवासीमध्ये २०४ को मृत्यु भयो ।
बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्कमा आउँदा आदिवासी समुदायमा महामारी फैलिएको देखिन्छ । सम्पर्कमा नहुनेहरूमा असर परेका उदाहरण कम छन् । १९८० को दशकपूर्व पेरुको रेन–फरेस्टमा बसोबास गर्ने नहुवा समुदाय यसका उदाहरण हुन् । सन् १९८४ सम्म यो समुदायमा कुनै संक्रमण फैलिएको थिएन । तर, त्यसपछि आफ्ना उत्पादन बेच्न काष्ठ व्यापारीसँग सम्पर्कमा आएका नहुवा आदिवासीमा तत्कालै इन्फ्लुएन्जाले प्रवेश गर्‍यो । ६ महिनामा नहुवा समुदायको आधाभन्दा बढी जनसंख्याले इन्फ्लुएन्जाको सिकार भएर ज्यान गुमाए ।
आदिवासी समुदायमा सामान्य रोगले पनि महामारीको रूप लिन्छ । आदिवासीहरू प्राय: अलग्गै रहन्छन् । उनीहरूमा आफ्नै किसिमको बसोबासको शैली हुन्छ । उनीहरू हरसमय समूहमा आवतजावत गर्छन् र सामानको साझा प्रयोग गर्छन् । बस्तीमा रोगको प्रवेश नहुँदासम्म जटिलताको सम्भावना कम हुन्छ । तर, आफ्नो उत्पादनको बिक्री, खाद्यान्नको व्यवस्थापनजस्ता कारणले बाहिरी दुनियाँसँग अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।
प्राय: आदिवासी समुदायले पाउने स्वास्थ्य सेवाको अवस्था निकै दयनीय हुन्छ । उनीहरू आफैँ पनि यो सेवा लिन चाहँदैनन् । कसैले सेवा लिइहाले पनि उनीहरूले असमानता भोग्नुपर्ने जोखिम भएको संयुक्त राष्ट्र संघले बताएको छ । राष्ट्र संघअन्तर्गतको आदिवासी समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विभागका अनुसार, आदिवासी समुदायले स्वास्थ्य सेवा पाइहालेमा पनि उनीहरूमा एक प्रकारको डर भइदिन्छ । सँगसँगै आदिवासी समुदायको जीवनशैली, सफा पानीको अभाव, सरसफाइका आधारभूत आधारहरूमा पर्याप्त उपलब्धता र प्रयोग नहुँदा उनीहरू संक्रामक रोगको उच्च जोखिममा हुन्छन् ।
आदिवासीको बसोबासको प्रकृति परम्परागत हुन्छ । प्राय: तीन पुस्तासम्मले एकै ठाउँमा बसोबास गर्छन् । समुदायले परिवारको रूपमा साझा जीवन चलाउँछन् । यो स्वरूपमा कतैबाट संक्रमणले प्रवेश मात्रै गर्‍यो भने समुदायभरि नै त्यो फैलिन्छ । रोगको जोखिमसँगै त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने समस्याको अर्को जोखिम छ । महामारीको समयमा व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुँदा र आफ्ना उत्पादनको बिक्री नहुँदा कतिपय आदिवासी समुदायमा भोकमरी सुरु हुन्छ । उत्पादन बिक्री गर्न बजार सञ्चालन भइदिँदैन, सञ्चालन भए पनि बिक्री गर्न जाँदा संक्रमित हुने डर हुन्छ भने बिक्री नगर्दा खाद्यान्नको अभाव हुने जोखिम हुन्छ । सूचनाको अभावले पनि कतिपय महामारीले विकराल स्थिति सिर्जना गरिदिन्छ । आदिवासी समुदायमा उनीहरूकै स्तरको चेतनालाई सम्बोधन गर्ने सूचना प्रसारित नहुनु र उनीहरूको भाषामा सूचना नदिइनुले संक्रमणसँग उनीहरू अनविज्ञ भइरहेका हुन्छन् । जानकारीको अभावमा अन्य समयजस्तै सामान्य दैनिकी गुजारिरहन्छन् । समुदायमा कसैको मृत्यु भएमा त्यसलाई कुनै दैविक शक्तिको प्रकोप ठानिदिन्छन् ।
कोभिड–१९ र आदिवासी
विगत १२ वर्षदेखि उत्तरी केन्यामा तस्करबाट जंगली जनावारलाई रक्षा गर्दै आएका रेन्जर पिटर मेसेमी अहिले डराएका छन् । आफूसँगै अन्य ७० साथीहरूको समूहमा उनलाई एकातिर सिकारीहरूबाट जंगली जनावारलाई बचाउने चुनौती छ भने अर्कातिर विश्वव्यापी फैलिएको कारोना संक्रमणबाट आफूलाई । विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वभर नै वन्यजन्तुको गैरकानुनी सिकारको सम्भावना बढाएको छ ।
नेसनल जिओग्राफिकले गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरूले सामुहिक आवाजमा भनेका छन्, ‘सम्भव त छैन तर एकआपसमा दूरी राख्न कडा कदम चालिरहेका छौं । कहिलेकाहीं मास्क र पञ्जा लगाउँछौं । नियमित हात धोइरहेका छौं ।’ हरसमय जंगलमा रहिरहँदा वन्यजन्तुसँग अपनत्व महसुस भएको छ । तर, यो मात्र त उनीहरूको संसार होइन । समस्या सामान्य नभएर झन् जटिल भएमा उनीहरूले फर्किनुपर्ने घर छ, उनीहरूलाई पर्खिने आफन्तहरू छन् । रेन्जरहरूले निगरानी गरिरहने ठाउँभन्दा केही पर जस्तोसुकै समस्या आए पनि कतै जान नसक्ने आदिवासी छन् । घर भन्नु जंगल र आफन्त भन्नु जंगलमा छन् । परिस्थिति जस्तोसुकै आए पनि परम्परागत जीवनशैलीलाई छाडेर कतै जाने ठाउँ छैन उनीहरूको ।
ब्राजिल र भेनेजुएलाको सिमानामा रहेको रेहेबे गाउँको उरारिकोएरा खोलाकिनारमा बस्ने यानोमामी समुदायका एक किशोरको कोभिड– १९ का कारण मृत्यु भएको पुष्टि भयो । श्वास–प्रश्वासमा समस्या भएसँगै ब्राजिलको रोराइमा जेनरल हस्पिटलमा परीक्षण गर्दा उनलाई कोभिड–१९ को संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । अप्रिल ३ मा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएका किशोरको केही दिनपछि मृत्यु भएको खबरसँगै अमेजोन क्षेत्रका आदिवासी समुदायमा खतराको घण्टी बजेको हो । उनको मृत्युपश्चात् सोसियो इन्भेरोमेन्टल इन्स्टिच्युटले निकालेको विज्ञप्तिले बताउँछ, ‘यानोमामी आदिवासीको क्षेत्रमा कोभिड–१९ फैलिन सक्ने मुख्य कारण त्यहाँबिना कुनै रोकतोक आवतजावत गर्ने २० हजारभन्दा बढी गैरकानुनी उत्खननकर्ताहरू हुन् ।’
विश्व नै जोखिममा भएको यो समय अर्थतन्त्र, राजनीति र सामाजिक परिस्थितिमाथि बहस भइरहँदा आदिवासी समुदायमा कोभिड–१९ को जोखिम कति छ भन्ने विषय छायामा परेको छ । आफ्नो समुदायमा संक्रमणले ल्याउन सक्ने विकराल स्थिति र दीर्घकालमा हुन सक्ने भोकमरी दुवैको जोखिममा आदिवासी छन् ।
अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगै अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रका विश्वव्यापी संघसंस्थाले सामाजिक दूरी कायम गर्नुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । महामारीको जोखिमसँग डराएका आदिवासी समुदायले भने आफ्नो परम्परागत ज्ञान र सीपअनुसार केही विधि अपनाएका छन् । विगत नदोहोरियोस् भनेर केहीले आफ्नो समुदायलाई साना–साना समूहमा विभाजन गरेका छन् । आदिवासी समुदायले आफ्नै घरेलु सीपबाट बनाएका पातको मास्क लगाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन् । त्रासकै कारण आफू बसिरहेको क्षेत्रभन्दा भित्र बसिरहेका छन् आदिवासीहरू ।
जहाँसम्म स्वास्थ्य सेवाको कुरा छ, आफ्नो समुदायमा भेटिएका पहिलो संक्रमितलाई अस्पतालमा गरिएको व्यवहारका कारण उनीहरूमा त्रास छ । ‘न्युयोर्क टाइम्स’ ले तयार पारेको एक रिपोर्टअनुसार, मध्यमार्च महिनामा श्वास–प्रश्वासमा समस्या देखिएका युवकलाई चार पटकसम्म अस्पताल लैजाँदा पनि उनको उपचार भएन । अवस्था अत्यन्तै जटिल भएपछि अप्रिल ३ मा मात्रै कोभिड– १९ परीक्षण गरिएको थियो ।
कोभिड–१९ को विषयमा आदिवासीमा सूचना प्रवाह कम भएको छ । उनीहरूको भाषा र सोचलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका सूचना कमै प्रवाह भएका छन् । संक्रमणबाट बच्न जंगल पस्दा उनीहरूलाई जंगली जनावरको जोखिम छ । विगतका कतिपय महामारी वन्यजन्तुबाट मानिसमा सरेको पनि पुष्टि भएका छन् ।
पर्यावरणीय संरक्षणका लागि आदिवासीले विभिन्न समयमा आफ्नै किसिमको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, यो महामारीको समयमा आदिवासीकै संरक्षण आवश्यक देखिएको छ । ब्राजिलको अमेजोन रेन–फरेस्ट क्षेत्रका कतिपय भाग अहिले सखाप भइसकेका छन्, गैरकानुनी तस्करीका कारण । कतिपय भाग जोगाउन डाभी कोपेनवाजस्ता आदिवासी समुदायका अगुवा लागिपरेका छन् । यो महामारीबीच आदिवासी समुदायमाथि षड्यन्त्र भएमा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा तिनै तस्करलाई हुन्छ । अहिले आदिवासी समुदायलाई कम प्राथमिकतामा राख्दा उनीहरूको परम्परा र अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्छ । आदिवासीको अस्तित्व नहुनु भनेको प्रकृति संकटमा पर्नु हो । यो महामारीमा आदिवासीको संरक्षण हुन सकेन भने आउँदा दिनमा पर्यावरणमा आउन सक्ने असन्तुलनको असरले विगतमा जस्तै आपत् निम्त्याउनेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७७ १२:११